कोरोना-सन्देशको ओइरो : अमृत थोरै अफवाह धेरै- विविधा - कान्तिपुर समाचार
मान्छेको चेतना सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो । युद्धका लागि एटम बम हो । अनिकालमा जादुमयी बीउ हो । आपत्तिमा सबैभन्दा ठूलो भरोसा हो । अहिलेको सन्दर्भमा यही चेतना नै भ्याक्सिन हो, एन्टिडोट हो ।
जेष्ठ १९, २०७७ राजन गोदार
मान्छे उहिल्यै बिलाएर जान्थ्यो । तर मान्छे–मान्छेबीच प्रेम पनि छ । त्यसैले त प्राणीजगतमा मान्छे सँधै वर्चस्वसहित अस्तित्वरत छ । मान्छे न हात्तीभन्दा ठूलो छ । न त सिंहजस्तो बलियो । न घोडा जस्तो दौडन सक्छ, न चराझैँ उडान भर्न सक्छ । न माछाझैँ पौडन नै सक्छ ।
तैपनि मान्छेले अस्तित्वमा यत्रो सत्ता कसरी चलाइरहेको छ ? यसको सीधा उत्तर के हो भने मान्छे सामाजिक छ । एकले अर्काको भावना बुझ्न सक्छ र विपत्तिमा सघाउन सक्छ । भाषाले जोडेको भावनात्मक एकता नै मान्छेको शासन सूत्र हो । यसको शक्ति भनेकै सामूहिकता हो ।
एकछिन सोचौँ, भोलि कोभिड–१९ नामक भाइरस संसारका सबै प्राणीबाट सबै प्राणीमा सर्ने गरी विकसित भयो भने के गर्ने ? संसारका सबै चराचरलाई मारिदिने ? सबै जीवजन्तुलाई भ्याक्सिन लगाउँदै हिँड्ने ? कीटपतंगहरुलाई डढेलोले सखाप पार्ने ? समुद्रपार भएर विश्वविचरणमा जाने चराहरुलाई भिसा लागू गर्ने ? कि गुँडमै लकडाउन गर्ने ?
जगजाहेर छ, लकडाउनले यो भाइरससँग लडिँदैन । केही चिजले लड्न सकिन्छ भने त्यो हो हामीबीचको भावनात्मक एकता । जो कथित जनहितकारी सन्देशका कारण यतिबेला आईसीयूमा छ ।
आजसम्म मान्छेले जति मान्छे कुनै विपत्तिले मार्न सकेको छैन । विपत्ति हिजो पनि आयो, आज पनि छ र भोलि पनि आइरहने छ । कोरोना पनि अन्तिम विपत्ति होइन । यसलाई केहीगरी जितेपनि मान्छे सधैंका लागि विपत्तिमुक्त हुन सक्दैन । यो सानो विपत्तिमै मानवीयता खुस्क्यो भने अरु विपत्तिमा के गरौंला ? कुनै विशेष क्षेत्र, देश, शहर, गाउँ, टोल मात्रै कोरोनामुक्त भएर ढुक्क हुन असम्भव छ । र सम्पूर्ण जगतबाट यो भाइरसको नामनिसान मेटाउन पनि सम्भव छैन ।
भ्याक्सिन, एन्टिडोट र औषधिका चर्चाको आनै आयाम छ । हर्ड इम्युन पनि उत्तिकै चर्चामा छ । आरोपप्रत्यारोपको मिडियामा ट्राफिक जाम नै छ । यो केही दिनको भलपानी हो । हरेक विपत्तिविरुद्ध मानव–एकताको विकल्प छैन । सबैभन्दा धेरै चर्चामा हुनुपथ्र्याे भावनात्मक एकता जगाउने सामाजिक सचेतना । विडम्बना, त्यही शून्य छ ।
मानवीय सन्तुलन र संवेदनशीलता नमरुन्जेल जस्तोसुकै विपत्तिविरुद्ध सानदार विजय अवश्य मान्छेकै पोल्टामा पर्छ । विपत्तिविरुद्ध मानव–एकता बाँचुन्जेल मान्छेका लागि घाम–जून उदाइरहन्छन् ।
चुल्हो नजल्नेहरुको मन कति जल्छ होला । भोक भड्किँदै जाँदा कतिको मनमा कति भक्कानो फुटे होलान् । बाँच्ने रहर कसो गरी थमथमाए होलान् । भोकभोकै खाना खोज्दा आफ्नाको भोकले अझै कति चिरियो होला तिनको मन ।
नकारात्मकलाई पशुवत र सकारात्मकलाई मानवीय भनिने गरिन्छ । खासमा मान्छेले गर्ने हरेक काम मानवीय काम हो । फरक यति मात्रै हो, एउटाले विनाश गर्छ । अर्कोले बचाउँछ । अक्सर आस्था, विश्वास, भरोसासहितको मानवीय सन्तुलन विपत्तिमा क्षत–विक्षत हुन्छ । यो सन्तुलन बिग्रन नदिन संसूचनाको सहारा लिइन्छ । यत्तिकै भनिएको होइन, भाषा जस्तो ठूलो आविष्कार अर्को केही छैन । भाषा नभैकन अन्य अभिव्यक्ति मात्रै भएको मानवसमाज कल्पना गर्न पनि गाह्रो हुन्छ । यो शताब्दीमा मान्छेले अर्को आशीर्वाद प्राप्त गर्‍यो वा आविष्कार गर्‍यो । संसूचना एक क्लिक र मिलिसेकेन्डका कुरा भइगए । प्रविधि त मिल्यो तर मूल मर्म नै सम्प्रेषण गर्न र उद्देश्यअनुसारकै प्रभाव पार्न प्रविधि मात्रै अधुरो हुन्छ । प्रज्ञा पनि चाहिन्छ जो नाश हुँदै गयो ।
मानवकल्याणका लागि प्रविधि र प्रज्ञाको संयोजनभन्दा अर्को सुन्दर संयोजन छैन ।
हामीबीचका जनहितकारी सन्देशहरुलाई ध्यान दिएर हेरौं त । अडियो, भिडियो, एनिमेसन, ग्राफिक्स यावत चिजको प्रयोग छ । सम्प्रेषणका लागि फालाफाल छन् प्रकार–प्रकारका माध्यम र प्लेटफर्म । दुर्भाग्य भनौं प्रज्ञाको प्रयोग लगभग हुन छोडेको छ । ती सन्देशहरुले बनाएको च्याम्बरभित्र मानवीय सन्तुलन निसास्सिएको छ । दिन खोजेको अमृत नै हो । विष मिसाएको÷मिसिएको चेत छैन । विषको प्रतिक्रियापछि मात्रै चेत पाइन्छ विष मिसिएको कुरा, विषको मात्राको कुरा ।
संसूचनाको प्रकृतिले सामाजिक मनोविज्ञानको विकास÷विनास गर्दछ । स्मार्टफोन र इन्टरनेटको युगमा थोरैलाई छोडेर आम जनजीवनमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दछ । व्यक्तिगत मान्यताहरु त्यही प्रभावअनुसार भत्कन्छन् र बन्छन् । आम मानसिकता, आनिबानी, मूल्य र मान्यता पनि बन्छन् । भत्कन्छन् । तर ढिलो भयो भने, मानवीय भावनात्मक एकता जो आईसीयूमा छ यसलाई ब्युँताउन सहज छैन । यी सन्देशहरुले आम मनहरुमा सजिलै जस्तो छाप पार्दै छन् त्यसलाई मेटाउन मुश्किल छ ।
जनहितका नानाथरी कोरोना–सन्देशहरुको ओइरो छ । फाट्टफुट्ट भेटिएका बाहेक औसत सन्देशहरुमा औपचारिकताको उद्देश्य मात्रै देखिन्छ । जसलाई टाउकोमा राख्नुपर्ने हो तिनैलाई पैतालाले थिचिएको छ । मान्छेको चेतना सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो । युद्धका लागि एटम बम हो । अनिकालमा जादुमयी बीउ हो । आपत्तिमा सबैभन्दा ठूलो भरोसा हो । अहिलेको सन्दर्भमा यही चेतना नै भ्याक्सिन हो, एन्टिडोट हो ।
प्रचलित कोरोना सन्देशहरुको प्रभावः सम्भावित लक्षणहरुसहित कोरोनाको परिचय दिन सफल । सामाजिक दूरी र व्यक्तिगत आरोग्य एवं सरसफाइमा आंशिक प्रभाव । सामूहिक सरसफाइमा न्यूनतम प्रभाव । कोरोना भाइरसको भय निर्माण गर्न सफल । संक्रमित, शंकास्पद र तिनका परिवारमाथि समाजले गर्ने व्यवहारमा प्रतिकूल प्रभाव । संक्रमितप्रति सहानुभूति र समानुभूति लगभग शून्य ।
यसबीच मुटुमा कीला ठोकेका केही खबरहरु छन् । सायद तपाईंसम्म पनि यी खबरहरु खबरदारी गर्दै आइपुगेका थिए होलान् ।
व्यक्तिगत/सामूहिक सुस्वास्थ्य एवं सरसफाइमा हौसला बढाउने सन्देश खोइ? भाइरससँग डराउने होइन, सावधानी अपनाउने सन्देश खोइ ? सम्मानजनक उपचार, उपलब्धता र सुनिश्चितता ती सन्देशहरुमा कहाँ छन्?
जिउँदाको जन्ती, मर्दाको मलामी । यसबीच यस्तो भएन । कोरोनाले घाँटी थिचेर केही जिन्दगी सक्किए । मलामी त दूरदूरको कुरा, उचित स्थानमा उचित दाहसंस्कारको समेत इन्कार गरियो । मरेकाको यो हाल छ । बाँच्नेको बेहाल कस्तो होला । बाँच्नु भाग्य होला कि दुर्भाग्य होला । कोरोनाको दाग लिएर बाँच्नु कति पीडादायक छ होला । तिरस्कार, क्रुरता जो भड्किरहेको छ ।
यो खबर पढ्दा, मैले नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान(नास्ट)लाई सम्झिरहेँ । जानेबुझेका स्वास्थ्य विशेषज्ञहरुलाई सम्झिरहेँ । स्वसुरक्षा अपनाउनु एक ठाउँमा होला । ज्युँदो कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न मिल्छ । दाहसंस्कार गर्न मिल्छ–मिल्दैन । शवबाट कोरोना सर्छ–सर्दैन । शव जलाउन हुन्छ–हुँदैन । कोरोना भाइरसले लगाएको दागबाट पनि संक्रमण सर्छ–सर्दैन । आदि–इत्यादि ।
भाइरस र लकडाउन मात्रै खोटी छैनन् । केवल डरत्रास देखाएर जनजनलाई आतंकित मात्रै बनाउने जनहितकारी सन्देशहरु झन् बढी दोषी छन् ।
सेवा नै धर्म हो । यो मन्त्र कोरोनाकालमा कमै सुनियो । एम्बुलेन्स कोरोना संक्रमित वा शंकास्पद बोक्न आनाकानी गर्छ । शववाहन संक्रमित जिन्दगीको शव बोक्दैन । अस्पताल उपचारको सेवा दिन मान्दैन । मान्छे मात्रै होइन मान्छेसँगै मानवता पनि घरभित्रै कोचिएको छ । मानवताको खडेरीमा नै जन्मन्छन् महामानव । केही मनकारी युवा कोरोना संक्रमितको उचित दाहसंस्कार गर्छन् । अनि घरघरको दराजभित्र कोचेको मानवता कुहिएर गन्हाउँछ । त्यसैले त, ती युवालाई सोझै तिरस्कार गर्छ समाज ।
आफ्नै अकर्मण्यतामाथि प्रश्नहरु तेर्सिएका छन् । ती युवाको सेवाविरुद्ध समाजले गरेको दुर्व्यवहार कति न्यायोचित छ ? त्यो ऊर्जाको वेग जो जनजनमा फैलनु पर्थ्यो । घरभित्रै थन्किनु पर्दा कस्तो बेहाल भयो होला ? तिनले कस्तो डोरी लगाएर, कस्तो छुरी चलाएर आफ्नो सेवाभावको हत्या गरे होलान् ? कस्तो सामाजिक मनोविज्ञान हुर्कँदै छ ? यस्तै हो भने, यो समाज पनि हाम्रो माझ धेरै नरहला ।
चुल्हो नजल्नेहरुको मन कति जल्छ होला । भोक भड्किँदै जाँदा कतिको मनमा कति भक्कानो फुटे होलान् । बाँच्ने रहर कसो गरी थमथमाए होलान् । भोकभोकै खाना खोज्दा आफ्नाको भोकले अझै कति चिरियो होला तिनको मन । मलर सदालाई भोकले सदाका लागि निल्यो ।
के त्यो गाउँमा हरकोही भोकै थियो? के त्यहाँ एक छाक खाना दिन सक्ने एक जना पनि थिएन ? मध्यरात किन नहोस् ढोका उघार्ने समाज थियो । बास माग्नेलाई गास र बास दुवै टक्रयाउने समाज थियो । जे छ त्यो पस्कने स्वभाविक स्वभाव थियो । कम्तीमा मान्छे खान नपाएर मर्ने समाज थिएन हाम्रो । सम्झँदै कहाली लाग्छ ।
आफ्नै गाउँ, आफ्नै टोल काँडे तार लगाएर प्रवेश निषेधित छ । जाने कुनै ठाउँ छैन । भोक र निद्राले जिन्दगी जुलुम छ । दया, करुणा, माया, सदभाव सबै कोरोनाको बतासमा उडी गए ।
यी दृश्यले म बेचैन छु । बेचैन त तपाईं पनि हुनुहुन्छ होला । तिरस्कार, दुव्र्यवहार चोक–चोकमा गन्हाएको छ । क्वारेन्टिन केन्द्रदेखि उपचार केन्द्रसम्म, सहरदेखि गाउँसम्म छीःछी दूरदूरको दूर्गन्ध फैलिएको छ । हत्यारा, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी बरु सम्मानित छन् । कोरोना शंकास्पद, संक्रमित र तिनका परिवारको कुनै सम्मान छैन । तीप्रति कुनै करुणाभाव छैन । समाजले यसरी बुझ्न थालेको छ कि तिनैले चाहेरै यो भाइरस ल्याएका हुन् । अपमान र तिरस्कारको कुनै सीमा छैन । सम्भावित अपमान र अवहेलनाको कल्पनाले नै गलिसकेको छ मान्छे । बरु रोग लुकाएरै मर्न तयार भएको छ । भाइरसको कष्ट सम्झेर भन्दा अपमान, तिरस्कार र घृणाको दृश्य कल्पेर मान्छेले आश गुमाउँदै छ । बिस्तारै सास पनि ।
भाइरस र लकडाउन मात्रै खोटी छैनन् । केवल डरत्रास देखाएर जनजनलाई आतंकित मात्रै बनाउने जनहितकारी सन्देशहरु झन् बढी दोषी छन् । मानवसमाजको यो कुरुप चित्र विपत्तिले निम्त्याएको बाध्यता मात्रै हुँदै होइन । त्रास र आतंकले मौलाएको टिठलाग्दो सामुदायिक मानसिकता पनि हो ।
विपद् संसूचना विशेषज्ञहरु कहाँ छन् ? मैले खोजेँ भेटिनँ । मेरा साथीहरुले पनि मेरा लागि खोजे, भेटेनन् । विभिन्न विज्ञ विशेषज्ञ भेटिए तर भेटिएनन् ती । योग्य जानिफकारले बोलिदिए यही कुरा वैध हुन्थ्यो, व्यवहारमा लागू हुन्थ्यो कि भन्ने आश थियो । भेटिएन । आश मर्‍यो । यति कुरा मैले कुनै ठूलो हैसियत र योग्यता राखेर बोलेको होइन । चिन्ताले ग्रसित भएर व्यथा पोखेको हुँ ।
ती सन्देशहरुले अहं भूमिका निभाउन सक्थे । हाम्रो दुर्भाग्य भनुँ वा अज्ञान, भाइरसको परिचय र रोकथाममै अल्झिगए । जस्तैः भाइरस सबैलाई लाग्न सक्छ । लक्षणहरुको रेखांकन । शंका लागेमा स्वास्थयचौकी धाउने कुरा । व्यक्तिगत एवं सामुदायिक हाइजिनका कुरा । हात धुने, खोक्ने, हाच्छ्युँ गर्ने तरिका अनि मास्क लगाउने कुरा । सामाजिक दूरी, घरमै बस्ने, घरमै सुरक्षित हुने कुरा । भाइरसका भ्रम र सत्यका थोरै कुरा । सारांशमा यति नै हो । प्रस्तुति र माध्यम फरकफरक शैलीका छन् । सहानुभूति र समानुभूतिजन्य सन्देशहरु पनि छन् जो कदाचित पर्याप्त छैनन् ।
कतिपय सन्देशहरु हतारमा कपी गरिएका छन् । समयसान्दर्भिक छैनन् । लक्षित जनमानसमा पर्न सक्ने प्रभावको कुनै अध्ययन छैन । समय–समयमा यस्ता सन्देशले पारेको प्रभावको मूल्यांकन गर्नैपर्छ । तर गरिएको छैन । विपत्तिको फरक चरणहरुमा सान्दर्भिक सन्देश सम्प्रेषण हुनुपर्छ । त्यो त सायद योजनामा पनि छैन । यस्ता सन्देशको प्रवाह गर्दा जस्तोसुकै गम्भीर परिस्थितिमा पनि मानवीय मूल्य मान्यता केन्द्रमा राखिनुपर्छ । जो खर्लप्पै भुलिएको छ । त्यसैले त समाज भ्रमित छ । पथभ्रष्ट छ । आतंकित छ । मानवतामाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने नपार्ने सम्भावनाको सम्प्रेषणपूर्व नै अध्ययन गरिनुपर्छ । गरि“दैन । एकोहोरो ओइरो चलेको चल्यै छ ।
अझै पनि पहिलो चरणकै सन्देशहरु चलिरहेको देख्दा उकुसमुकुसवाला सकस भएको छ । कसलाई गएर सोधौं यी प्रश्नहरु ? विश्व स्वास्थ्य संगठनको कार्यालय? राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग? संकट व्यवस्थापन समिति ? नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान? सञ्चार मन्त्रालय? समाजकल्याण मन्त्रालय? थाहा छैन । सामाजिक दूरी एवं स्वसुरक्षात्मक आनीबानीलाई प्रोत्साहन गर्ने सन्देश खोइ ? व्यक्तिगत/सामूहिक सुस्वास्थ्य एवं सरसफाइमा हौसला बढाउने सन्देश खोइ? भाइरससँग डराउने होइन, सावधानी अपनाउने सन्देश खोइ ? सम्मानजनक उपचार, उपलब्धता र सुनिश्चितता ती सन्देशहरुमा कहाँ छन्?
यस्तै सन्देशहरु चलिरहने हो भने स्वसुरक्षासहित सहयोगी भावना र सहानुभूति कसरी जागृत हुन्छ ? नागरिक, समुदाय, छरछिमेकीको सकारात्मक भूमिका कसरी सिर्जना हुन्छ ? अध्ययन, अनुसन्धान र निगरानीबाट प्राप्त दैनिक उपलब्धिका अपडेट खोइ ? सावधान गराउने, उत्साही पनि गराउने । अनुशासित र जिम्मेवार बनाउने । रोबोट होइन, मान्छेलाई मान्छे नै बनाइराख्ने उद्देश्य खोइ ? यो अभावलाई कहिले सम्बोधन गर्ने ? मानवसमाजको भावनात्मक एकतामा पुगेको क्षतिको परिपूर्ति कहिले गर्ने? कसरी गर्ने ?
अनुमान लगाउन सकिन्छ, यो कोरोना सामाजिक सचेतनामा ठूलो धनराशि खर्च भएको छ । फजुल खर्च । संकट व्यवस्थापन समिति आफैमा सिथिल छ सायद । तैपनि समाजशास्त्री, संसूचना विज्ञ, सोसल मार्केटिङ विशेषज्ञ र सार्वजनिक स्वास्थ्य महामारीका प्राज्ञसहितको एउटा समूह बनाओस् । र सम्पूर्ण जनहितकारी सन्देशहरुको रचना, योजना र प्रयोगमा सक्रिय भूमिका खेल्न सकोस् । अब, अहिले र आउँदा विपत्तिमा पनि फेरि यस्तो गल्ती नदोहोरियोस् ।
प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७७ १५:२३
जेष्ठ १९, २०७७ एलपी देवकोटा
जुम्ला — भारतबाट आएका नागरिक राख्न बनाइएको जिल्लास्तरीय एकीकृत क्वारेन्टाइन भरिभराउ भएपछि आइतबार दिउँसो जुम्ला पुगेका ३५ जना गाउँ छिरेका छन् । स्थानीय तहले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था नगरेपछि उनीहरु गाउँ छिरेका हुन् ।
प्रहरीका अनुसार आइतबार दिउँसो भारतबाट फर्किएका ४० जनालाई सदरमुकाम खलंगा पुर्‍याइएको थियो । त्यसमध्ये चन्दननाथ नगरपालिकाका १२ र तातोपानी गाउँपालिकाका २३ जना सोझै गाउँ गएका छन् भने गुठिचौरका ५ जनालाई गाउँपालिकामा पठाइएको छ । उनीहरु गाउँ छिरेपछि संक्रमण बढ्ने भन्दै स्थानीयबासी त्रसित बनेको खलंगाका कमल केसीले बताए ।
धनगढीबाट आइतबार दिउँसो ३ बजे जुम्ला पुगेका उनीहरु राति १२ बजेसम्म क्वारेन्टाइनमा ठाउँ नपाएपछि गाउँ छिरेका हुन् । सदरमुकामस्थित चन्दननाथ नगरपालिकामा कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय, लामास्थित दुर्गा मावि, कुडारीस्थित सरस्वती मावि र रारालिहीस्थित सिता माविलाई क्वारेन्टाइन बनाइएको छ । ४ वटै क्वारेन्टाइनमा अहिले ५ सय १ जनालाई राखिएको छ । निर्माण व्यवसायी संघको भवनमा क्वारेन्टाइन बनाउने निर्णय भए पनि अदालतमा मुद्दा परेपछि समस्या भएको निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी ओमप्रकाश देवकोटाले बताए । ‘क्वारेन्टाइन बनाउने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो, हामीले सहजीकरण मात्र गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सदरमुकाममा थप क्वारेन्टाइन बनाउन खोजे पनि ठाउँठाउँमा स्थानीयले अवरोध गरेपछि सफल भइएन ।’
आइतबार रारालिहीमा अलपत्र परेका चन्दननाथ–३ का ८ जनालाई डाँडाकोट स्कुलको क्वारेन्टाइनमा राखिएको नगरप्रमुख कान्तिका सेजुवालले बताइन् । ‘बस्तीभन्दा टाढा क्वारेन्टाइन बनाउन खोजे पनि ठाउँ नभेटाउँदा समस्या छ,’ उनले भनिन्, ‘भारतबाट आउनेको संख्या बढेपछि सबै क्वारेन्टाइन भरिए, थप क्वारेन्टाइन बनाउन सकिएको छैन ।’
प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७७ १५:२२